Fiteny · Desambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fiteny · Desambra, 2018
Tantara mikasika ny Fiteny tamin'ny Desambra, 2018
Sahara Andrefana 25 Desambra 2018
Ho an'ireo kolontsaina sasantsasany, ny sakafo, ho an'ny hafa kosa, ny mozika, ary marobe ireo kolontsaina manamafy ny amantarana azy amin'ny alalan'ny taotrano. Anisany iray amin'ireo toetra manokana ara-kolotoraly ho an'i Sahara Andrefana, ny lovantsofina, ary ny tononkalo no manana lanjany betsaka indrindra eo anatrehan'ireo Sahraouis [teny espanola]. Manana lanjany goavana ao anatin'ny fiainan'izy ireo io literatiora io amin'izao fotoana izao
Nahatratra Dingana Lehibe Iray Vaovao ny Tontolon'ny Bilaogy Sodaney
Manomboka mahazo vahana ny tontolon'ny bilaogy Sodaney. Tena mavitrika ireo bilaogy voasoratra amin'ny teny Anglisy amin'izao, mampiseho ny endrika tena izy, samihafa ary voajanaharin'i Sodàna amin'izao tontolo izao.
Azia Atsinanana 15 Desambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Jolay 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ihany ny Global Voices amin'ny teny Persiana. Tamin'ny volana Jona 2007 no nanombohany ny fandikanteny voalohany ary efa nanomboka nivoaka tao amin'ny tranonkala vitsivitsy ireo fandikan-teny sasany, anisan'izany ilay iray malaza, Gooya.com ary Digg,Balatarin Iraniana ....
Azia Atsimo 07 Desambra 2018